एकैपटक पाँच जना विशेषज्ञ डाक्टर – Rara Khabar
सोमवार, अशोज ११, २०७८ (2021-09-27)
एकैपटक पाँच जना विशेषज्ञ डाक्टर
सुर्खेत, १७ साउन ।
लामो समयदेखि विशेषज्ञ डाक्टरको अभाव झेलिरहेको प्रदेश अस्पताल सुर्खेतले एकै पटक पाँच जना विशेषज्ञ डाक्टर पाएको छ । विशेषज्ञ डाक्टर थपिएपछि प्रभावकारी सेवा सुविधा दिने अस्पतालले जनाएको छ ।
अस्पतालमा छाला तथा यौन रोग, नाक, कान र घाटी, बालरोग, फिजिसियन र हात तथा नसा रोग विशेषज्ञ डाक्टर आएका छन् ।
अस्पतालका अनुसार छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डा. प्रभावसिंह राजपुत, नाक, कान तथा घाटी रोग विशेषज्ञ डा. सन्तोष बस्नेत, बालरोग विशेषज्ञ डा. प्रदीप पौडेल आएका छन् । यस्तै फिजिसियन डा. संजीव भण्डारी र हाडजोर्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ डा. सुभद्र श्रेष्ठ रहेका छन् ।
नयाँ विशेषज्ञ डाक्टरलाई विहिवार अस्पतालमा स्वागत गदै मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. डम्वर खड्काले कर्णालीका जनतालाई अस्पतालले थप विशेषज्ञ सेवा दिने बताए । उनले भने, प्रदेश अस्पताल सुर्खेतले पहिलो पटक यतिधेरै विशेषज्ञ डाक्टर पाएको छ ।
विशेषज्ञ सेवा पनि थपिएको र नयाँ भवनमा पनि छिट्टै सर्ने भएपछि अस्पतालमा सेवाग्राहीको चाप अझ बढ्ने उनले बताए ।
सुरुमा तीन जना डाक्टरबाट संचालन भएको अस्पतालमा अहिले २० जना विशेषज्ञसहित करिव २७÷२८ जना डाक्टर कार्यरत रहेको सुपरिटेन्डेन्ट खड्काले बताए । अस्पतालमा अव एनेस्थेसियोलोजिष्ट डाक्टर आवश्यक रहेको छ ।
अस्पतालमा अहिले दैनिक ७÷८ सय विरामी आउने गरेका छन् । अस्तालमा आउने अधिंकाश विरामी गाइनोसम्वन्धी हुने गरेको वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. केशर ढकालले बताए । उनले भने, एउटै डाक्टरले दैनिक ७०÷८० जना विरामी हेर्नुपर्छ ।
तस्वीर नयाँ विशेषज्ञ डाक्टरलाई स्वागत गदै अस्पतातसँग संयुक्त । तस्वीर प्रकाश पन्त ।
प्रकाशित मितिः १७ श्रावण २०७६, शुक्रबार १०:३६
रेडपाण्डाको छालासहित जाजरकोटमा एक जना पक्राउ
देउता नुहाउन हिडेका जुनीचाँदेका २५ जना स्थानीय चाँदे हिमालमा बेपत्ता, एकको मृत्यु
सई नारायण शर्मा सर्वोत्कृष्ट प्रहरी
झोलुङ्गे पुलले जोडयो दुई गाउँको सम्बन्ध
भेरी कर्णालीमा अखिल (क्रान्तिकारी) सक्रिय
लागुऔंषध र जनावरकाे छाला सहित दुई जना प्रक्राउ
प्रदेश सभा सदस्य सिंहको पहलमा नलगाडमा बेलीब्रीज
जाजरकोटमा कर्णालीकै पहिलो जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र
लागुऔषध कारोवारमा संलग्न ६ जना पक्राउ
Theme: by Suresh Acharya.